एप समय समयमा रोकिन्छ ? | गृहपृष्ठ
Home प्रविधि एप समय समयमा रोकिन्छ ?
प्रविधि 283 views
एप समय समयमा रोकिन्छ ?
स्मार्टफोन प्रयोगकर्ताका लागि आफ्नो उपकरणमा एप ≈याङ्ग हुने र काम नगर्ने समस्या नौलो होइन । जुनसुकै ब्राण्डका मोबाइलमा पनि यो समस्या समयसमयमा आउने गर्छ । यस्तो बेला एप बन्द गरेर पुनः चलाउने प्रयासले मात्र सधैं काम नगर्न सक्छ । फोनमा अकस्मात् एप रोकिने समस्या समाधानका केही उपाय यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ :
फोनमा रहेको क्याश मेमोरी क्लियर गर्नुहोस् । यसका लागि फोनको सेटिङ मेनुमा गएर एप्लिकेशन म्यानेजरको छनोट गर्नुहोस् । अब अल ट्याबभित्र गएर जुन एप्समा समस्या छ, त्यसमा क्लिक गर्नुहोस् । यसपछि क्रमशः ‘फोर्स स्टप’, ‘क्लियर क्याश’ र ‘क्लियर डाटा’ छनोट गर्नुपर्छ ।
यो प्रक्रिया अपनाएपछि आफ्नो फोनलाई रिबुट वा रिस्टार्ट गर्नुपर्छ । यसो गर्दा अधिकांश समस्याको समाधान हुन्छ । धेरै एपमा समस्या भए यदि फोनमा रहेका एकभन्दा बढी एपमा यस्तै समस्या भए पनि यही प्रक्रिया दोहो¥याउनुपर्छ । यसो गर्दा फोनमा सञ्चित एपसम्बन्धित जानकारी डिलिट हुन्छ, जसले गर्दा एप पुनः भर्खरै इन्ष्टल गरिएकोजस्तो अवस्थामा पुग्छ र नयाँले झैं काम गर्न थाल्छ । फोनको अवस्था तथा कार्यक्षमता राम्रो राख्न समयसमयमा यो प्रक्रिया अपनाउँदै गर्नुपर्छ । साथै, एपको नयाँ अपडेटेड भर्जन उपलब्ध भएमा तिनलाई पनि अपडेट गर्दै गर्नु राम्रो हुन्छ ।(एजेन्सी)
विश्वकप २०१८ का अत्याधुनिक प्रविधि
४ असार २०७५, सोमबार ०९:३६
२८ जेष्ठ २०७५, सोमबार ०९:५४
२८ जेष्ठ २०७५, सोमबार ०९:४७